मानिसलाई उपहार मा राम्रो रक्सी। रूपमा असामान्य मानिस रक्सी को एक बोतल एक उपहार मा पैक?
मानिसलाई उपहार किन्न - तपाईं व्यक्तिको बानी र प्राथमिकताहरू थाहा छैन, विशेष गरी यदि सजिलो छैन। यस मामला मा यो रक्सी दिन उपयुक्त छ। तर पेय चयन धेरै गम्भीर दृष्टिकोण हुनेछ। एक विज्ञान - मानिस एउटा उपहार मा एक राम्रो रक्सी छनौट। तखतालाई एक बोतल बन्द पहिलो उपलब्ध लिन हतार नगर्नुहोस्। पहिलो केही महत्त्वपूर्ण नियम सिक्न।
एक वयस्क स्टेशन नजिकै वा राम्रो ब्रांडीको बेचन छैन को बजार वर्ग मा एउटा सानो पसलमा भनेर बुझ्न पर्छ। गम्भीर किनमेल लागि नियमित पसलमा जानु पर्छ। आदर्श यसलाई जहाँ यो वोदका को एक सस्तो बोतल को खोज मा पीने scurry छैन, एक विशेष आउटलेटहरू हुनुपर्छ।
छैन हुनत एक आदर्श खरिद ब्रांडेड cognacs जहाँ उत्पादन क्षेत्रमा, फ्रान्स गएर गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ अन्य विकल्प छन्।
मा रक्सी को बोतल एक मानिस को लागि एक उपहार गर्न सस्तो हुन। राम्रो brandies छैन सस्तो सबै छन्। प्रविधि र विनिर्माण परम्परा सम्पूर्ण बिन्दु। रक्सी वा ब्रान्डी को 1 लीटर सुरु गर्न, निर्माता रक्सी को 10 लिटर प्रयोग गर्नुपर्छ, र बहुमूल्य समय केही वर्ष खर्च। यो सबै धेरै महंगा छ।
सस्तो मादक पेय सट्टा व्यारेल मा वृद्ध को ओक sawdust मा जिद्दी गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले पनि अंगूर र अन्न रक्सी को एक मिश्रण बाट उत्पादित हुन सक्छ। यो सबै गुणस्तर असर गर्छ, तर एकदम उत्पादन लागत कम गर्छ। एक उपहार आवश्यक छैन जस्ता पेय पदार्थ किन्न।
सबैभन्दा खतरनाक विकल्प - एक सस्तो जालसाजी किन्न। यस मामला मा, तपाईं मात्र पैसा बर्बाद तर पनि स्वास्थ्य गर्न irreparable क्षति हुन सक्छ।
एक नक्कली कसरी भेद गर्न
, मानिस एउटा उपहार मा रक्सी किन्न के सानो कुरा ध्यान सोच:
को डाट विचार, यो काग, एक विशेष सिलिकन सामाग्री वा compacted sawdust देखि हुन सक्छ। यदि बोतल एक धातु स्क्रू टोपी द्वारा बन्द छ, उत्पादन कम गुणस्तर वा जालसाजी छ।
खोल Stoppers विचार गर्नुहोस्। यो छाला-तंग बोतल घाँटी, कहिल्यै wincing हुनुपर्छ।
आफै बोतल मात्र ग्लास हुन सक्छ। बलियो रक्सी हानिकारक पदार्थ अलग, प्लास्टिक संग प्रतिक्रिया।
लेबल मा हेर। यो सीधा अफसेट बिना पूर्ण संलग्न हुनुपर्छ।
लेबल जाँच्न। यो संरचना, विनिर्माण मिति र निर्माता मा पूर्ण जानकारी छ। र यो सबै सहि हुनुपर्छ।
को उत्पादन शुल्क टिकट कसरी affixed हेर्नुहोस्। त्यो लेबल को शीर्ष सधैं छ।
बोतल गर्नुहोस्। राम्रो ब्रांडीको पर्खालहरु मा एक ट्रेस छोड्छ र तल केही भारी घटेको पर्छ।
बोतल मा पेय को रंग गाढा खैरो गर्न हल्का खैरो देखि भिन्न हुन सक्छन्, तर सामग्री सधैं पारदर्शी छ।
तपाईं मानिसको जन्मदिन एक उपहार बनाउन जाँदैछन् भने, रक्सी राम्रो आकार बोतल गर्न चयन गर्न छ। प्याकेजिङ्ग को उत्पादन Complicating, निर्माता counterfeiting विरुद्ध reinsured छ। यो पार्टी विशेष कन्टेनर आदेश भन्दा पारंपरिक बोतल मा नक्कली खन्याउन धेरै सजिलो छ।
यस पेय को मूल
तपाईं एक स्टोर मा काउन्टर उभिरहेको र मानिसलाई उपहार मा एक राम्रो रक्सी छनोट गर्न चाहनुहुन्छ छन् कल्पना गर्नुहोस्। तर बोतल मेरो आँखा बस भाग्नु कि धेरै छन्। यस पेय को मूल बारेमा यहाँ तपाईंलाई उपयोगी जानकारी। वास्तवमा ब्रांडीको फ्रान्स मा छन् कि मात्र ती पेय कल गर्ने अधिकार छ। यो देश मा, को लागि रक्सी को उत्पादन ठूलो आदर उपचार गरिएको छ। साथै, गुणस्तर कडाई राज्य नियन्त्रित छ, चिरपरिचित ब्रान्डहरु प्रत्येक अन्य संग प्रतिस्पर्धा र आफ्नो प्रतिष्ठा कायम छन्।
पेय पदार्थ आर्मेनिया, Georgia, माल्डोवा, युक्रेन, रूस मा उत्पादन - एक अंगूर ब्रांडीको। तिनीहरूमध्ये पनि, सभ्य विकल्प पायो, तर तपाईं ध्यान लेबल मा जानकारी पढ्न आवश्यक छ। यी विकल्प, अक्सर आर्मेनियाली र जोरजियन रक्सी चयन गर्नुहोस्। यी देशहरूको रक्सी (ब्रान्डी) connoisseurs को ध्यान दिनुपर्छ। केही पनि आर्मेनियाली रक्सी ब्रान्डहरु को "Courvoisier VSOP" भन्दा, उदाहरणका लागि, भन्दा छैन बुरा छन् भन्ने विश्वास गर्छन्। तर यो कुरा सबैलाई मा आफ्नै स्वाद छ।
मानिस एउटा उपहार मा राम्रो रक्सी, यो सम्मानित निर्माताहरु किन्न मनमोहक छ। यस्तो उपहार सराहना हुनेछ। यो पुल उत्पादनहरूमा नेताहरू हो: Hennessy, Remy मार्टिन, Courvoisier, Martell, Bisquit, Camus, Augier र Delamain।
तपाईँलाई एउटा उपहार आर्मेनियाली वा जोरजियन निर्माता चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं बोतल "Ani" को लज्जित हुने छैन, "नूह", "Ararat", "Egrisi", "Armazi"। यी उत्कृष्ट अनुभवी पेय दोषी नही उत्सव, वा व्यापार साझेदार निराश छैन।
जोखिम को आधिकारिक वर्गीकरण: फ्रान्स
मूल्य पनि रक्सी पिउन जोखिम मा निर्भर गर्दछ। अंशहरूको अंगूर रक्सीको व्यारेल मा maceration भनिन्छ। को फैल पछि बोतल मा पिउनका लागि उभिए जो समय, खातामा लिएको छैन।
फ्रान्सेली brandies आफ्नो जोखिम वर्गीकरण छ। अगाडि लेबल deciphered अप्रकट पत्र दिन निम्नानुसार:
VS - ब्रान्डी, कम्तिमा2वर्ष को लागि व्यारेल मा बर्ष।
उच्च - उमेर बढन को3वर्ष।
VSOP - ओक व्यारेल4वर्ष।
VVSOP - पेय कम्तिमा5वर्ष को लागि परिपक्व।
Xo -6वर्ष र माथि देखि पेय निकाल्न।
त्यसैले, तपाईं "Courvoisier VSOP" बोतल को हातमा भने, त्यसैले तपाईं4वर्ष ओक व्यारेल मा उमेर जो ब्रान्डी, किनेको।
यदि विशेष स्वाद निर्माता blending को विधि पुग्छ, त्यसपछि ब्रांडीको उमेर कान्छो रक्सी छलफल गरिनेछ।
लेबल रूपमा "सोभियत cognacs"
पूर्व सोभियत संघ आफ्नो अपनाए छ cognacs को वर्गीकरण। बाटो गरेर, उत्पादकहरु, सबै कुरा, शब्द "रक्सी" को लेबल मा हार्ड प्रयोग बाबजुद। ब्रांडेड र संग्रह, साधारण: यो पेय तीन प्रकार मा उपलब्ध छ। (- अंशहरूको वर्ष प्रत्येक फुली) साधारण brandies एक फुली तोकिएको।
पुराना cognacs को वर्गीकरण जटिल:
HF (रक्सी वृद्ध) - 6-7 वर्ष को समय बास।
KVVK (रक्सी सुपर अनुभवी) - उमेर 8-9 वर्ष पेय।
COP (ब्रांडीको पुरानो) - अंश 10 वर्ष।
ओएस (धेरै पुरानो) - 12 वर्ष भन्दा बढी पेय।
को लागि cognacs को संग्रह अवधि जोखिम '23 परिभाषित र थप गरिएको छ।
कसरी वरदान बनाउन
अन्तिम प्रश्न र: "? मानिस ब्रान्डी एक बोतल एक उपहार मा पैक कसरी असाधारण" र यो प्याक गर्न सबै आवश्यक छ?
यो सबै आफ्नो स्वाद मा निर्भर गर्दछ। राम्रो रक्सी नै दिन लायक छ। यो एक संकीर्ण उपहार झोला हालिदिए गर्न सकिन्छ र त्यो पर्याप्त हुनेछ। वा तपाईंले माथि रक्सी एक उपहार बक्स मा, आदरणीय हेर्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मनमा राख्न, एक उपहार बक्स मा पिउन छैन अधिक महंगा किनभने गुणस्तर को छ, र किनकी प्याकेजिङ्ग को।
तपाईं एक असल मित्र एक उपहार दिन र एक मजाक गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक दूध प्याकेज को रूप मा उदाहरणका लागि गत्ता बक्स गुणस्तर, गोंद गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ दूध भन्ने साइन इन गर्नुहोस्।
तपाईं एक मानिस वा विशेष अवसरको लागि एक महत्वपूर्ण मिति लागि एक उपहार रूपमा राम्रो रक्सी चयन भने, यो एक मोम छाप, यो लेखिएको, कति वर्ष तपाईं घाँटी भद्दा मुद्दा आफ्नो उपहार र primotat छाप खोल्न सक्छन् बनाउन सम्भव छ।
खाना पकाउने ककटेल आफ्नै "Bianco बतास"
पेय storytellers, देवताहरूलाई, नायक र honeymooners - खमीर बिना मीड
"Artsakh mulberry": पेय को समीक्षा
बकाइन मनका बुन - योजना। सिकारुहरूको लागि beading
"Atsekardol": प्रयोग, निर्देशन, समीक्षा, analogs लागि सङ्केत गर्छ
साउदी अरब को आधुनिक झण्डा - विकास र गलतफहमियहरुलाई विवरण
चार हन्निबल Lecter: फिलिमहरु को अभिनेता र टिभीमा श्रृंखला पंथ Maniac बारेमा
जहाँ, व्हाइट कपिड के गर्ने र कसरी गर्ने?
चिसो appetizers को मूल व्यञ्जनहरु
एक जलजीवालय मा सुन जस्तो माछा - सान्त्वना र शान्ति प्रतीकको